SOICARE Rakagadziriswa Dhizaina 2.2L Aromatherapy Yakakosha Oiri Humidifier Diffuser, China SOICARE Rakagadziriswa Dhizaina 2.2L Aromatherapy Yakakosha Oiri Humidifier Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Akaderera
SoICARE Nyore Dhizaina 2.2L Aromatherapy Yakakosha Oiri Humidifier Diffuser
Nzvimbo Yokutanga: GungdOng
Model Number: SP-H01
Minimum Order Yakawanda: 5000 Pieces
Packaging Details: 6 Zvidimbu / katoni
Kupa Mikana: 100000 zvidimbu pa mwedzi
2.2L Husiku Mwenje Mwenje Ultrasonic Mhepo Humidifier
VANOGONESA VANOGONESESA PABHEDHI: Na 2. 2L tangi hombe, inotonhorera humidifier inobvumidza anosvika maawa makumi maviri nemana ekushanda mumhute yakaderera. Femera mudondo mhepo yakachena mumba mako.
WHISPER-QUIET: Yayo ultrasonic tech inoshanda pane iripedhi-yakanyarara 35dB. Kudzora kwakanyarara uye chiratidzo chechiedza mwenje otomatiki shutoff inoita kuti unakirwe wakasununguka, kusagadzikana-kwekurara pasina.
3. AUTO SHUT-OFF, YAKachengeteka KUSHANDISA: humidifier yemubhedhuru inozovhara yega nered LED mwenje pane painopera mvura. Iwe unogona kusunungura zvachose kunetseka kwako pamusoro payo kuchaoma kumhanya kana iwe wakarara ..
Rated Voltage AC110V kana AC 220v
chiedza 7 Ruvara akatungamira mwenje
Mistu Vhoriyamu 200ml / h
Nguva Yokupedzisira 11hours
Saizi yeyuniti 160 * 150 * 230mm
Unit uremu 600g
Ruvara rwebhokisi saizi 16.3 * 17 * 26 cm
nhuri 6 zvidimbu / katoni
Ukuru hweCarton 53 * 35 * 28cm
NW / carton 4 Madzimabo
GW / katoni 5 Madzimabo
SP-A07 800ml WIFI APP Dzora Commerce Air Scent Machine